Nagu saabsan - Soo-saaraha TC
Beddelka shaashadda oled adag ee iPhone XS MAX
Keeno bedelka lcd ee iPhone 11
Kusamee bedelka lcd ee iPhone 11 pro
Kusamee bedelka lcd ee iPhone 11 Pro Max
Keen isbadal lcd ee iPhone XR
Beddelka shaashadda LCD ee iPhone 6G
Beddelka shaashadda LCD ee iPhone 6P
Beddelka shaashadda LCD ee iPhone 6S
Beddelka shaashadda LCD ee iPhone 6SP
Beddelka shaashadda LCD ee iPhone 7G
Beddelka shaashadda LCD ee iPhone 7P
Beddelka shaashadda LCD ee iPhone 8G
Beddelka shaashadda LCD ee iPhone 8P
TC waa shirkad tiknoolajiyad xirfadeed ku takhasustay R&D, wax soo saarka iyo iibinta shaashadda bandhigga LCD & OLED ee taleefanka gacanta. Waxay hadda ka mid tahay soo saarayaasha waaweyn ee shaashadda soo bandhigta suuqa qalabka mobilada ee Shiinaha.
TC waxay leedahay in kabadan 500 oo shaqaale ah iyo in kabadan 5,000 oo mitir laba jibbaaran oo aqoon kororsi ah imika, dhamaantoodna waa boodh la'aan, heerkulka joogtada ah iyo aqoon isweydaarsiga qoyaanka, oo ay kujiraan in kabadan 1,000 mitir laba jibbaaran 100 aqoon isweydaarsiyo aan lahayn boodh. Shirkaddu waxay leedahay koox farsamo iyo maamul xoog leh, oo ay ku jiraan in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan kooxda R&D, waxaa jira in ka badan 50 injineero xirfadlayaal ah oo ka shaqeynaya, qalab iyo tayo.
Shirkaddu waxay leedahay 4 otomaatig COG ah, khadadka wax soo saarka FOG, 5 khadad si toos ah otomaatig u duubaya, 4 khadadka tooska ah ee 4 isug uruurinta tooska ah, iyo shixnadda guud ee billaha ah ee alaabada kumbiyuutarrada 800K, qalab otomaatig ah oo si buuxda wax u taraya ayaa si wax ku ool ah u hubin kara tayada iyo joogtaynta alaabta.
TC waxay hirgelisaa nidaam maareyn tayo leh oo adag, waxay ku guuleysatay kalsoonida iyo ammaanta macaamiisha iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan, tayo sare leh oo wax soo saar iyo adeeg xirfadeed leh, waxayna sameysay xiriir wadashaqeyn muddo dheer oo wanaagsan oo lala yeesho soo saarayaal badan oo gudaha iyo dibaddaba caan ku ah. Iyada oo loo marayo tijaabooyin soo noqnoqday iyo iswaafajin, alaabada TC waxay gaareen heerka warshadaha hogaaminaya ee muujinta dhalaalka, midabka midabka, dhererka, xagasha daawashada iyo tilmaamayaasha kale.
TC waxay u hogaansantaa mabaadii'da "adeegga xirfadeed ee heerka koowaad ee macaamiisha, alaabooyinka aadka u wanaagsan ee macaamiisha dib loogu celiyo", iyo mabda'a ah "inaan kuugu adeego si qalbi furan, xirfad iyo u heellan adeeg", waxaa naga go'an inaan dhisno sumadda TC, oo leh Adeegyada VIP ee mudnaanta u leh macaamiisha kasta, oo leh karti xallin ganacsi oo qaan gaar ah, isla markaana ku ilaashada sumcad wanaagsan isla warshadda.
TC waxay si diirran u soo dhaweynaysaa booqashadaada iyo hagidaada, waxayna rajeyneysaa inay xiriir ganacsi oo waqti dheer ah kula yeelato. Wali miyaad ka walwalsan tahay tayada sheyga? Weli miyaad ku degdegeysaa iibka alaabta kadib? Fadlan dhibaatadaada noo daa. Shirkaddu waxay si xiiso leh u rajeyneysaa booqashadaada, waxayna soo dhaweyneysaa la-tashigaaga iyo taageeradaada. Haddii aad fileyso inaad doorato koox xirfadle ah, adeeg tayo sare leh, alaab heer-koowaad ah, maxaad sugeysaa, fadlan nala soo xiriir! Mahadsanid!
Alaabada kulul, Khariidadda bogga, AMP Mobile